ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှု မူဝါဒ | လိုက်ဖ်ဒူးကော်ပိုရေးရှင်း
အမှာစကား သဘောတရားအယူအဆ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် အကျဥ်းချုပ် ရုံးခန်းလမ်းညွှန်
လိုက်ဖ်ဒူး ယူအက်စ်အေ အိုင်အန်စီ
ပင်မစာမျက်နှာ > ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုမူဝါဒ
လိုက်ဖ်ဒူး ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်း၏ အရေးပါမှုကြောင့် အောက်ပါမူဝါဒများအပေါ် အခြေခံ၍ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
1. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းအတွက် လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းအတွက် လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်၏လိုအပ်ချက်များ (JIS Q15001）နှင့်ကိုက်ညီသည့် လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်နှင့် "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရန် အခြေခံစည်းမျဉ်းများ" ကိုရေးဆွဲ၊ အကောင်အထည်ဖော်၊ ထိန်းသိမ်းပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါမည်။
2. "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရန် အခြေခံစည်းမျဉ်းများ" အား လေးစားလိုက်နာခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရန် အခြေခံစည်းမျဉ်းများ" ကိုလေးစားလိုက်နာပြီး၊ ဌာနတစ်ခုစီ၏ စီးပွားရေးအကြောင်းအရာနှင့် သတ်မှတ်ချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့် သင့်တော်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရန်အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုချမှတ်ပြီး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုစည်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရင်း အချက်အလက်ပိုင်ဆိုင်သူနှင့် ကိုယ်စားလှယ် (အသက်မပြည့်သေးသူ သို့မဟုတ် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်) များအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းစသည့်၊ သတင်းအချက်အလက်ပိုင်ဆိုင်မှုကို သင့်တော်စွာလုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။
3. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် လုံခြုံမှုထိန်းသိမ်းခြင်း
ျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် လုံခြုံမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို တိကျမှန်ကန်စွာနှင့် နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မှီ အကြောင်းအရာအတိုင်း ထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားပါမည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ မမှန်မကန်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပေါက်ကြားခြင်းစသည့်တို့အား ကာကွယ်၍ ပြင်ဆင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်မည်။
4. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် အခြားအစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလေးစားလိုက်နာခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြား အထူးသတ်မှတ်ထားသည့်စည်းမျဉ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များစသည်တို့ကို လိုက်နာပါမည်။
2005 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ3ရက်
လိုက်ဖ်ဒူးကော်ပိုရေးရှင်း ကုမ္ပဏီ (အောက်တွင် "ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ" ဟုသုံးနှုန်းမည်" တွင်စုစည်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုပါမည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုမူဝါဒကို ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ဆောင်နေသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်သည့်အခါ အချက်အလက်များပေးအပ်ပါက အကျုံးဝင် ပါမည်။
ထို့ပြင်၊ ဖောက်သည်မှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို ပေးအပ်ရန် ဆန္ဒမရှိပါက ဖောက်သည်၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပေးခြင်းကို ငြင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ဆောင်နေသော ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုစသည်တို့ကို အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းများ ရှိနိုင်သည့်အတွက် ကြိုတင်၍ နားလည်ပေးစေလိုပါသည်။
တတိယပါတီသို့ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍
ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားခြင်းများအတည်ပြုခြင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းတို့အတွက် ဖောက်သည်အား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းရှိပါမည်။
ဖောက်သည်ထံမှ လက်ခံရရှိခဲ့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို ဖော်ပြထားသည့်အသုံးပြုမည့်ရည်ရွယ်ချက်ဘောင်အတွင်း၌သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဖောက်သည်၏ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အခြားရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။
・အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ငွေတောင်းခံခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းနှင့် ထို့အတွက်အတည်ပြုခြင်းပြုလုပ်ရန်
・ အီးမေးလ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားခြင်းအား အတည်ပြုခြင်းနှင့် အီးမေးလ်ပို့ရန်
・ တောင်းဆိုခဲ့သည့်ကြော်ငြာကုမ္ပဏီသို့ တောင်းဆိုထားသည့်စာရွက်စာတမ်းစသည်တို့ကို ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်
・ ပူးပေါင်းဖြေဆိုပေးခဲ့သည့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းများအတွက် ဆုလာဘ်စသည်တို့ကို ပေးပို့ရန်
・ လျှောက်ထားပေးခဲ့သည့်ဆုစသည်တို့အတွက် ဆုလက်ဆောင်စသည်ကိုပေးပို့ရန်
・ အသုံးပြုနေသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများ၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်
ဖောက်သည်များအား ပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုပေးစွမ်းနိုင်စေရန်အတွက် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်စသည်တို့၏အကြောင်းအရာများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်စသည်တို့၏အကြောင်းအရာများကို ဖောက်သည်တစ်ဦးချင်းစီနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေပြီး ဖောက်သည်စိတ်ကြိုက်အထူး ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်
ဖောက်သည်မှ မှာခဲ့သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ကျေနပ်မှုအဆင့်ကို စစ်တမ်းကောက်ရန်
စာရင်းအင်းဖြင့်စီမံဆောင်ရွက်ထားသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုပေါင်းပြီး စစ်တမ်းရလဒ်အနေဖြင့် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ရန်
ဖောက်သည်၏အသုံးပြုမှုအခြေအနေကိုဖော်ဆောင်၍ ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ ပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်
・ထောက်ပံ့ပေးသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသောသတင်းအချက်အလက်စသည်တို့ကို ပေးပို့နိုင်ရန်
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်စသည်တို့၏အသုံးပြုမှုအခြေအနေကိုဖော်ဆောင်၍ ကုမ္ပဏီနှင့် ကုမ္ပဏီအုပ်စုစသည့်၊ ဖောက်သည်အတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိမည်ဟုထင်မှတ်ထားသည့်ကုမ္ပဏီ//အုပ်စုတို့၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် စစ်တမ်းစသည်တို့ကိုပို့ပေးရန်
3. တတိယပါတီသို့ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍
ကုမ္ပဏီသည် အသုံးပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက် ပြည့်မှီရန်အတွက် အုပ်စုကုမ္ပဏီများသို့ သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် အောက်ပါအခြေအနေများမှလွဲ၍ ဖောက်သည်၏ခွင့်ပြုချက်မရလျှင်၊ တတိယပါတီများသို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
စစ်တမ်းအတွက် ဆုလာဘ်နှင့် ဆုစသည်တို့အတွက် လက်ဆောင်အနေဖြင့် ငွေပေးသည့်အခါတွင် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းစသည်တို့ကိုကြားခံ၍ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ဖလှယ်သည့်အခါ
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှင့် လျှို့ဝှက်သဘောတူညီချက်ချုပ်ဆိုထားသော မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများ၊ တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းအပ်နှံမည့်ကန်ထရိုက်ကုမ္ပဏီများအတွက် အသုံးပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအတာဘောင် အတွင်းတွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ကိုင်တွယ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုသည့်အခါ
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်အနေဖြင့် ဖောက်သည်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို တစ်ဦးချင်းစီ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမလုပ်နိုင်သည့်အခါ
ဥပဒေအရ ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်းခံခဲ့ရသည့်အခါ
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှင့် ဖောက်သည်၏အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစသည်တို့ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊ ကာကွယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်ဟု ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်အခါ
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို တတ်နိုင်သလောက်မှန်ကန်တိကျစွာ၊ နောက်ဆုံးပေါ်အကြောင်းအရာများဖြင့် စီမံခန့်ခွဲနေပါသည်။
‌ဖောက်သည်မှ တောင်းဆိုပြီး၊ တောင်းဆိုခြင်းကို ဖောက်သည်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုပြီးသည့်နောက်တွင် ဖောက်သည်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်အချက်အလက်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။
သို့သော်လည်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုပယ်ဖျက်လျှင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို မပေးနိုင်ခြင်းများရှိပါသည်။
‌‌ဖောက်သည်မှ ပေးလာသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ ပြင်ပမှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်ဆီးခြင်း၊ မမှန်မကန်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပေါက်ကြားခြင်းစသည်တို့၏အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး သင့်လျော်သောလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်များ ကိုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
6. ကွတ်ကီး စသည်တို့အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် အသုံးပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက် ပြည့်မှီရန်အတွက် ဖောက်သည်တို့၏ ဝင်ရောက်ခွင့် သမိုင်းနှင့် အသုံးပြုမှုအခြေအနေစစ်တမ်းကောက်ယူရန်၊ ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးသော ၀န်ဆောင်မှုများပေးရန်အတွက် ဖောက်သည်မှ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဝင်သည့်အခါ IP လိပ်စာ နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်နှင့် ကွတ်ကီး နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ဝင်ရောက်ခွင့်သမိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါမည်။ ဖောက်သည်မှ ဘရောက်ဇာဖြင့် ကွက်ကီးကို ငြင်းပယ်မည့်ဆက်တင် ကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ဆိုက် ၏ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုရန် ကန့်သတ်ခံရခြင်းများရှိနိုင်သည့်အတွက် ကြိုတင်၍ နားလည်ပေးစေလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ချိတ်ဆက်ထားသော အခြားကုမ္ပဏီများမှာအော်ပရေတာများ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အိုဆာကာစီရင်စု၊ အိုဆာကာမြို့နယ်၊ ချူးအိုးရပ်ကွက်၊ ခဝရချော 1-6-10 JP အဆောက်အအုံ5လွှာ
ဤ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုမူဝါဒ နှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက အောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်နှင့်လိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အချိန် - မနက်9နာရီ မှ ညနေ5နာရီအထိ (စနေနှင့် တနင်္ဂနွေ၊ ရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။)